Author: Kerisar Vudobar
Qoondaaloota Gadaa aangoo qabatan sirnaan muudu, eeybisu. Seenaa ummatoota addunyaa keessatti godaansa heedduu argina. Isaaniis, bara Gadooma abbootii isaanii keessa waggaa 40 abbootii isaanii eeganii kan dhalatan waan tahaniif sadarkaa Gadaa keessa seenuudhaan seeenaa paartii tahuu dandayan. Isaaniis warraa akka a. Oromoonni karaa Qaalluu Waaqaan walqunnamuu malee, akkaataa biraas niqabu. Yeroo kanatti taphatanii caalatti walbaruu jalqabu.
Aadaa sirna gadaa Dhallii namaa akkaata itti naannoo isaa hubatee, itti jijjiiru qaba. Goggeessa Gadaa Miseensaa fi Marsaa Gadaa b. Oromlo godaansa Oromoo kan ofumaan deemaa ture kana, isa jaarraa 16ffaatti akeekuun hin tahu.
Akka bara saniitti eenyulleen aadaa kana nifudhata. Egaa yaa dargaggoota Oromoo, jechi A. Lolli argamnaan akka kjtaaba qophaawee walgurmeessee duula. Akka mangoddoonni Booranaa himanitti Gadaa jaaruuf yaalii dheeraan eega godhame booda, Gadaan yeroo dheeraaf bifa hojechuu dandayu dhaabbate. Ituu keessatti — Ruuboo jedhamu. Gosoota Oromoo keessaa Booranni hangafa. Ijoolleen dhiiraa sadarkaa Gammomaarra jiran: Ormoon naannoo Mandayyoo, Dallofi Jamjam bara dheeraa jiraataa turanii dhawaata lafa naannoo isaaniitti siqaa, irra jiraataa dhufan.
Gadooma sadarkaa itti ilmaan kormaa aangoo polotikaa qabataniidha.
Akkaataan qabannoo qabeenyaa itti loon bobbaasan, looniifi bishaan eelaa baasan, itti qotaniifi akkaataan itti waa horatanii dhimma ittiin bahan aadaa Gadaa keessatti gamtoomaafi marabbaatu calaqqisa.
Maqaan Goggeessota Gadaa bakka garagaraatti: Mana Maxxansaa Elenii Ibiddi hangafaafi quxxusutti adda bahee walkabjuuniifi waliif abboomamuun buluun dhalate.
Yeroo kana keessatti dhimma biyya, bulchiinsa, sera, aadaa, amantiifi seena dabre baratu. Dabalataanis, Dirribii Damusee, Aadaa kanaafi kana fakkaatan ala bahuun hawaasa keessaa nama baasa.
Raaboma waggaa 33 — 40 6. Sirni manguddootaan qaceelu amaluma hawaasa doofaa taheellee kan Oromoon dhaabbate jabaa tahuun isaa, hangafaafi quxxusuun qaceeluu isaati.
Waan sirna kana keessatti tahan hundi akka aadaafii amala biyyaatti fudhatamee kabajama. Ayyaana kanarratti Oromoonni dhaqanii galma isaatti qaalluu olii muudu.
Ragaa kana lamaanirraa kan hubachuu dandeenyu, Oromoon godaanee daangaa Keeniya kaasee hamma daangaa Tigreetti qubachuu kan dandahee, yeroo dheeraa keessa akka tureedha. Namuu roorroo biyyarra geesse ittisuuf waan ittiin lolu- xiyyaas tahee, eeboofii gaachana mataa isaatii qopheeyfatee farda lolaas qabaate taha. Wallo keessati kan Gadaa fudhate Harmuffaa jedhama.
Sadarkaan Gadooma isaanii waggaa 40 jiddutti waan tahaniif, isaan keessatti dalagaa akkanaa doorama kan qaban wagaa jidduutti kan jiran Tuulama keessatti Qondaala, Ituu keessatti Raaba, akkanatti ofqopheessu. Tahullee sadarkaaleen Gadaa jiruuf jireenya dhala Oromoo mara calaqqisiisa. Dhugaan isaa garuu sirna amantiis, ofkeessaa qabaachuudha. Ilmaan Bareenummaas akka walitti heddommaachaa deemaniin adda adda bahanii qubachuu jalqaban. Toleeraa Tasammaa fi Hundasaa Waaqwayyaa irraa. Dabballooma waggaa 2.
Inniniis waan sirna sana gadi jabeesse akka tahe hubatamaadha.
Ilmaan kormaa sadarkaa lammaffaa fixanii waggaa 16 — 24 jidduu: Mootiin Habashaa Minaas akka jabatti Hambisaafi Harmuffaa seeenaa dhaabbate. Sirni Gadaa sirnaafi seera Oromoonni ittiin walbulchu, kan duulee roorroo ofirraa ittisu, kan dinagdee isaa ittiin tikfatuufi dagaagfatu, akkaata inni itti waliin jiraatuufi kan hawwiin dhala Oromoo cufa ittiin guutu ture.
Aadaa jiran keessaahiis amantiin hordafamaa ture, sirnicha utubee kan jabeesse dha. Kanaaf, Gadaan waggaa saddeet saddeetiin lakkaawama. Eega Gadaan ijaarame, akka himamsa manguddootti Booranatti waggaa taha jechuudha.
Sababootii godaansaa uuman akkuma biyya sanaafi deenaa yeroo sanaarratti hudeeyfama.
Guutuu hawaasichaa keessatti yeroo itti aangoon polotikaa Gadaa tokkorraa kanitti dabru, ayyaana kanarratti horiin loon qalamanii, nyaachisni guddaan godhama. Kanarraa Marsaan Gadaa Arsii keessatti waggaa 80 taha jechuudha. Yubooma waggaa 56 Gadaa Tuulamaa keessatti Gadoomni waggaa 32 — 40 gidduutii waan taheef kana yaadachiisuun barbaachisaadha.
Hariiroon kun dura sadarkaa maatii keessatti gad dhaabbate. Kanaaf aangoo polotikaa keessaa qooda fudhachuu dandayu.
Jecha qofa osoo hintaane ummatni habashaas Itoophiyaa akka hintaaneefi alaa akka dhufan seenaan dhugaa baha. Oromoota sirna akkasii jalatti qindeessuudhaaf yeroo dheeraa fudhate. Aadaa sana keessaa immoo amantiin maddee maal akka fakkaatu kophatti ilaalla. Kanneeniis addaan kan baafataman: